swopnil sansar: December 2008
आकाशका ताराभन्दा बढी चम्किरहेका छन्, स्पटलाइट बत्तीहरू । पलपलमा आफ्नो रङ फेर्छन् । रातो, नीलो, पहेलो, हरियो रङमा लस्करै चम्किरहदा सिङ्गै आकाशका ताराहरू धर्तीमा ओर्लिएजस्तो भान हुन्छ । ठमेलको एक साझ पुस महिनालाई स्वागत गर्न पर्खी बसेको छ । विस्तारै रात छिप्पिदैछ, चिसो पनि बढिरहेको छ । मुटु कमाउने जाडो छ, त्यही जाडोमा सधैझै ठमेलको नगरकोट दोहोरी साझमा जीउ रन्काउने गीत प्रस्तुत गर्दैछन् कलाकारहरू । मादल, हार्मोनियम, तबला र किबोर्डको सुमधुर सङ्गीतले सबैका पीडा भुलाइदिएको छ । सबै आफ्नो धुनमा मस्त छन् । ग्राहकहरू मेनु हेरेर खाने कुरा माग्दैछन् । कोही रोजाइ अनुसारका खाना लिदैछन् । तिनका आखा मञ्च तर्फ सोझिएका छन्, जहा हसिला अनुहारका युवतीहरू सङ्गीतको तालमा कम्मर मर्काएर नाच्दैछन् । गलामा हरियो पोते, मखमली पहिरन र तिनका बदामी गाजलु आखाले ग्राहकको मन लोभ्याएको भान हुन्छ । लाग्छ, आकाशको जून धर्तीमा ओर्लिएको छ ।स्टेजको माथिल्लो लहरमा वाद्यवादकहरू सङ्गीतको मीठो धुन झन्काइरहेका छन् । एउटा कुनाबाट हार्मोनियमको सुरिलो धुन तरङ्गित भइरहेको छ, जसमाथि औलाहरू चलाइरहेका छन्, रमेश सुवेदी, २९ । चारैतिर आखा नचाएर अरूले रमाइलो लिइरहदा हार्मोनियमको धुनमा रमेशले पीडाको धुन मिसाइरहेका छन् ।
आखै अगाडिका यी मनोरम दृश्य उनले नियाल्न सकिरहेका छैनन् । किनभने, उनका लागि भौतिक संसार अध्यारो छ । केराबारी-८, मोरङबाट नौ वर्षगाडि काठमाडौ पसेका रमेश जन्मदै दृष्टिविहीन थिए । हुर्केर ठूलो भएपछि साथीभाइ स्कुल गएको चाल पाउदा आफू पनि जान खोज्थे तर अरूले झै पढ्न-लेख्न नसक्दा मन खिन्न हुन्थ्यो । धेरै समय उनले त्यो स्कुलमा त पढेनन् । यद्यपि, गुरु हरि बस्नेतले गाउनका लागि दिएको प्रेरणा र छिमेकी दाजु चन्द्र र्राईले दिएको माया उनले भुलेका छैनन् । हरेक साझ साढे ६ बजेदेखि राती ११ बजेसम्म विभिन्न खालका बाजा बजाउनु उनको दिनचर्या हो । यसरी नै उनको एक वर्ष बित्यो नगरकोट दोहोरी साझमा । गाउनमा पनि उनको सोख छ । गीतहरू उनको आवाजमा रेकर्ड पनि भएका छन् । दोहोरी साझ भए पनि प्रायः आधुनिक गीतहरू गाउछन् । कोटेश्वर दोहोरी साझमा काम गर्ने इन्द्र भित्रीकोटी नामका कलाकारले उनलाई यहा ल्याएका हुन् । एकताका दोहोरी भनेपछि त्यति मन नपराउने रमेश अहिले आएर त्यही व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । भाइ, बहिनी, छोरा र पत्नीका साथ उनी कालीमाटीमा बस्छन् । दोहोरी साझबाट कमाइने मासिक पाच हजार रुपियाबाट कोठा भाडा र घर खर्च चलाउछन् । गार्न्धर्व सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्रबाट छ वर्षगायनकला सिकेका सुवेदीले ललितकला क्याम्पसबाट गायनमै स्नातक गरेका छन् ।
सुवास मुखियासित तीन वर्षम्म गितार सिकेको पनि अनुभव छ उनीसग । अहिले त लेबोरेटरी मावि किर्तिपुरमा आफै सङ्गीत पढाइरहेका छन् उनले । भविष्यमा राम्रो सङ्गीत संयोजक बन्ने सपना छ उनको । दोहोरीमा काम गर्दा निकै रमाइलो लागिरहेको छ उनलाई । यहा आउने विदेशी पाहुनाले उनका गीत मन पराएर 'वान्स मोर' भन्दा आनन्द लाग्छ । रेस्टुरा सञ्चालक सुशील लामा उनको कामको प्रशंसा गर्दै भन्छन्, "उहा निकै मिहिनेती मान्छे हो । उहाका सबै प्रस्तुति मलाई एकदमै मन पर्छन् ।"सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट कामको खोजीमा भौतारिएर छ वर्षघि काठमाडौ प्रवेश गरेका निरञ्जन बस्नेत, २७, बौद्धको सन्ध्या दोहोरी साझमा काम गर्छन् । विभिन्न बाजागाजा बजाउने र गीतहरू पनि गाउने कला छ उनमा । साझ ६ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन् र लाग्छन् कालोपुलतर्फ जहा उनकी पत्नी र छोरी उनको पर्खाइमा बसिरहेका हुन्छन् । मासिक छ हजार रुपिया आम्दानीबाट उनले आफ्नो परिवार पालिरहेका छन् । आफूजस्तै दृष्टिविहीन साथीहरू मिलेर उनीहरूले एउटा ब्यान्ड पनि खोलेका छन्, नेपाल दृष्टिविहीन सांस्कृतिक ब्यान्ड । यसमा उनी सचिव छन् । जनसेवा मावि मोरङमा ८ कक्षा पढ्दापढ्दै काठमाडौ छिरेका हुन्, सुदूरपूर्व साघु-८, ताम्रँङ, ताप्लेजुङका प्रेम लिम्बू 'संयोग', २७ ।
सङ्गीत सिक्ने ठूलो सोख बोकेर राजधानी आएकै पाच वर्षभइसक्यो । गार्न्धर्व विद्यासङ्गीत र एनएबी इन्स्टिच्युटमा सङ्गीत सिकेका दृष्टिविहीन प्रेम अहिले चाबहिलस्िथत 'सम्झना दोहोरी'मा काम गर्छन् । दुई वर्षगाडि 'झिमझिम परेली' रेस्टुरा“ सिनामङ्गलमा गाउने र बजाउने गर्थे । अहिले कालोपुलमा भतिजसग बसेका उनलाई हातमुख जोर्न रेस्टुराको कमाइले पुगिराखेको छ । मैतीदेवीस्थित एक संस्थामा बासुरी सिकाउने गर्छन् उनी । एक क्लासको १ सय २५ रुपिया मिल्छ । साताको एकपल्ट शङ्खपार्कको 'रिङ् अफ द फायर रेस्टुरामा पनि बाजा बजाउने उनले काम पाएका छन् ।
घडीको सुइले रातको ८ बजाइसकेको छ । सडकछेउमा कतैबाट सुरिलो बासुरीको धुन सुनिन्छ । यो धुनले सबैलाई लठ्याउछ । बासुरी बजाउने त दृष्टिविहीन छत्र तामाङ पो रहेछन् । गणेशस्थान चाबहिलको अन्डरग्राउन्डमा रहेको 'सम्झना दोहोरि'मा विरही भाकामा उनको बासुरी बज्छ । तिनै बाजाको तालमा गीत गुञ्जन्छ :
सागर बरु सुकेर गई जाला
जान्न माया कहिले नि सुकेर
जून तारा झरेर गई जाला
जान्न माया कहिले नि झरेर
रातो पछ्यौरी, रातै मखमली पहिरन र पहेलो पटुकीमा सजिएकी ती युवतीले गीत गाइरहदा सबै मन्त्रमुग्ध बन्छन् । स्याबुन-९, सङ्खुवासभामा २९ वर्षगाडि जन्मेका तामाङ छ वर्षे देखि राजधानीमै छन् ।
उनी दुई वर्षगाडि मोरङकी मनकुमारी लिम्बू सग विवाहबन्धनमा बाधिएका हुन् । उनले सम्झना दोहोरीमा काम गरेको वर्षदिन पुग्यो । पहिले राती १ बजेसम्म उनको दोहोरी चल्थ्यो । अहिले ११ बजे बन्द भइसक्छ । यसले गर्दा व्यापारमा घाटा भएको बताउछन् रेस्टुराका म्यानेजर उमेश मैनाली । कपिलवस्तुका अर्जुन पौडेल गोङ्गबुको मनकामना दोहोरी साझमा काम गर्छन् । राजधानीका अन्य रेस्टुराका तुलनामा चाबहिलस्थित यस दोहोरीमा सबैभन्दा धेरै दृष्टिविहीनले काम गर्छन् । एक दर्जन कलाकारमध्ये आधा दर्जन त दृष्टिविहीन नै छन् । यीमध्ये उदयपुरका कुमार पौडेल, वीरकमल श्रेष्ठ र इलामका टीपी सावा यसै दोहोरीमा काम गर्छन् । सङ्गीत धुन गुन्जिरहदा फेरि गीत सुनाइन् एक युवतीले गीत गाईन् ,
मायालुलाई पर्खिबसे मलमल
मलमल किरी जूनकीरी
पाइन यो सालैमा ।
मङ्सिरले बिदा गरी पुस लागिसक्दा ती युवतीले जीवनसाथी नपाएको पीडा पोखे पनि गौशालाको नवदर्गा दोहोरीमा अक्टोप्याड बजाइरहेका दृष्टिविहीन उमेश श्रेष्ठले भने जीवनसाथी पाएको डेढ वर्षनाघिसकेको छ । दिनहु साझ ६ देखि राती ११ बजेसम्म अक्टोप्याडमा स्टिकले हिर्काएर मीठो धुन निकाल्छन् उमेश । यसले वातावरण नै अर्कै बनाइदिन्छ । रातको १० बज्दैछ । नवदर्गा दोहोरी साझ गौशालाको एउटा ठूलो कोठा । ग्राहकहरू आफ्नै धुनमा बियरको चुस्की लिइरहेका छन् ।
हातमा समाएको चुरोटको धूवा निरन्तर उडिरहेको छ तर तिनका आखा स्टेजतिर एकोहोरिएका छन् । जहा गुरुङ पहिरनमा सजिएकी युवतीको कपाल मुसार्दै अर्का गायक दोहोरी भाकामा भन्दैछन्,
टाढा पर्‍यो पाइ
बाध्यताले बि झै भयोहितको मायालाई ...।उमेशले पनि अरूले झै“ गाएर रातको १२ बजेतिर रातोपुलस्िथत कोठामा पुग्दा दृष्टिविहीन पत्नी नेहा शर्पा उनलाई कुरेर बसिरहेकी हुन्छिन् । बिहानको खाना दुवै जना मिलेर बनाउ“छन् । महेन्द्ररत्न क्याम्पसबाट अङ्ग्रेजी मेजर विषय लिएर स्नातक गरेकी नेहाले 'सङ्गीत सरगम इन्स्िटच्युट'मा दृष्टिविहीनलाई अङ्ग्रेजी भाषा पढाउ“छिन् । दुवै जना दृष्टिविहीन हु“दा उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ - भन्छन्, "हाम्रँ जीवन रमाइलो छ । खासै अप्ठ्यारो लाग्दैन । बानी परिसक्यो ।"राजधानीका दोहोरीमा करिब डेढ दर्जन दृष्टिविहीनहरू काम गर्छन् । घाम डुबेर आकाशका तारा मुस्कुराउ“दा 'नगरकोट दोहोरी'मा रमेश सुवेदीले गीत सुनाए :
सा“झको घाम डुबिसक्यो
यात्रा अझै बा“की नै छ
रात धेरै लम्बिसक्योयात्रा अझै बा“की नै छ ...।
उनीहरू सा“च्चि नै मनैले गाउ“छन्, मनका गीतहरू ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 4:34 AM
Labels: दृष्‍टिबिहिन को संसार
विकलसँगका पल बिताएका
(स्वर्गिय रमेश विकललाइ भेटेर अन्र्तवार्ता लिने अन्तिम नेपालि पत्रकार म नै हो । उहाँ को निवासमा गएर तयार पारिएको अन्र्तवार्ता कान्तिपुर दैनिकको कोसेलिमा गत हप्ता प्रकाशित भएको छ । यो अनुभुति पनि आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।)
हँसिलो मुद्रा, सेतो पछ्यौरा ओढेर सेतै टोपी लगाएको, डायरीमा हातहरू चलमलाइरहेको तस्बिरमा एक साताअघि यसै दैनिकमा रमेश विकलबारे लेख छापिएको थियो । अस्पतालको शय्यामा विकलले पढ्न पाउनुभयो-भएन थाहा छैन । छापिएको साता दिन नबित्दै तिनै विकल सधैँका लागि टाढिए । एक महिनाअघि आरुबारीस्थित उनको निवासमा पुग्दा उनी छतको पारिलो घामतातिरहेका थिए । केही समयपछि उनले लगे, जहाँ उनले बनाएको पोर्टेटले एकोहोरो हामीतिरै नियालिरहेको थियो । २० वर्षको उमेरदेखि लेख्न थालेका विकलले बाल्यकाल सम्झँदै भने, 'गाउँमा बूढापाकाले रमाइला कथा सुनाउँथे । हजुरआमाले घरमा सुनाउनुहुन्थ्यो । म आफ्ना साथी बटुलेर तिनै कथामा नयाँ कुरा मिसाएर सुनाउँथे, पछि तिनै कथालाई निगालाको कलमले रूखबाट बनाएको मसीमा चोबेर लेख्थँे ।'छुट्ने बेला विकलले फेरि भेट्ने वाचा गरेका थिए, 'अर्को दिन दिनभरि बसेर गफ गरांैला है ।' सात दिन नबित्दै उनले संसार छाडे । बुधबार मध्याह्न एफएममा निधन भएको खबर पत्याउनै सकिनँ । उनीसँग भएको कुराकानी झलझली सझिरहें । सँगै बसेर खिचेको तस्बिर हेरिरहें । लाग्यो, विकल सामुन्ने बोलिरहेका छन् । मनका कुरा साटिरहेका छन् । विकलले साहित्यलाई कहिल्यै पेसाका रूपमा लिएनन् । साहित्य पेसा बन्न सक्दैन भन्ने धारणा राख्थे उनी । देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विगति हटाउन र जागरणका लागि आफूले लेख्ने गरेको उनले बताएका थिए । 'साहित्य पेसा होइन, सेवा र साधना हो,' उनी भन्थे । विकलको लेखनमा सधैं गरिब र निम्न वर्गका पात्रले स्थान पाउँथे । मधुमालती, लुखुर,े सडक बढार्ने न्हुछेमाया चटरी पसल्नी, काइली अजी, द्वारे बा, घमाने, खलाल, रामवीरे, मन्दिरअगाडि उभिएर फूल दिने प्रतिमा सबै उनका कथाका पात्र हुन् । राम्रो साहित्य सिर्जना गर्न विषयवस्तुको ज्ञान, छनोट, साधना र सीपको आवश्यकता हुनुपर्छ भन्थे उनी । विशेषगरी कथा लेखनमा प्रसिद्धि कमाएका विकलले उपन्यास, नाटक, नियात्रा र बाल साहित्यमा कलम चलाए । उनका उत्कृष्ट कथालाई 'अ लिफ इन बेगिङ् बोल' का नाममा लेखिका मञ्जुश्री थापाले अंग्रेजी अनुवाद पनि गरेकी छन् । पछिल्लोपटक उनले मेरी शेली -पिबी शेलीकी श्रीमती) को विज्ञान उपन्यास 'याङ्कस्टेइन' लाई नेपालीमा भष्मासुर नाममा अनुवाद गर्दै थ्ािए । उनी निरन्तर जीवनी लेख्ानमा डुब्न चाहन्थे, अचानक गति रोकियो । मृत्युले उनको बाटो छेकेर आफूसँगै लग्यो । उनलाई सोधें, 'सँसार छाड्नुअघि के गरेर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?' उनले भने, 'साहित्य सिर्जना गर्दागर्दै जान पाए हुन्थ्यो ।' नभन्दै त्यस्तै भयो ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 6:21 AM
(यो अन्र्तवार्ता आजको कान्तिपुर कोशेलीमा प्रकाशित भएको छ ।)
सहरी कोलाहलदेखि पर कुनाको आरुबारी टमस हार्डीको उपन्यास 'फार फ्रम द म्याडिङ क्राउड' झैं लाग्छ । सुन्दर गाउँदेखि अलि पर हरियो जंगल छ । बाँसका बाक्ला रूखहरु आफ्नै गतिमा हल्लिरहेका छन् । जाडोयाममा सबैका लागि प्यारो लाग्ने न्यानो घामले स्पर्श गर्छ । आरुबारी चोकैमा एउटा बूढो पीपलको रूख ठिंग उभिरहेको छ । त्यसको नजिकै एउटा घरको छतमा उमेरले ८० पुगेका वृद्घ केही लेखिरहेका छन् ।
आठ दशक पार गरसिक्दा पनि रोकिएको छैन रमेश विकलको साहित्य सिर्जना । नदी बगिरहेझैं निरन्तर छ -त्यसो त उनको एक उपन्यासको शीर्षकै छ, 'अविरल बग्दछ इन्द्रावती') । दिनहुँ केही न केही लेखिरहेका हुन्छन् उनी । फुटकर रचना कति लेखिए थाहा छैन । किताबका रूपमा भने झन्डै एक दर्जनजति प्रकाशित छन् । भर्खरै साझाबाट प्रकाशित उनको आत्मकथा 'मेरो अबिरल जीवन गीत' को दोस्रो खण्ड लेख्ने तयारीमा छन् हिजोआज । उनी नेपालीमा सिर्जनामात्र गर्दैनन्, अंग्रेजीका स्तरीय पुस्तकको अनुवादसमेत गर्छन् । अमेरकिी लेखक ज्याक लन्डनको 'द सि उल्फ' लाई 'समुद्री हुँडार' नाम दिएर नेपालीमा अनुवाद गरेका छन् । उनले अनुवाद गरेको मेरी सेली -कवि पर्सि बेसी सेलीकी पत्नी) द्वारा लिखित विज्ञान उपन्यास 'प्याङ्केस्टाइन' नेपालीमा 'भष्मासुर' शीर्षकमा चाँडै आउँदै छ ।
प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तरसम्म पढाइन्छन् र पढिन्छन् रमेश विकलका कथाहरू । बोर्डिङको पाठ्यक्रममा समेत राखिएका छन् पनि । उनले कसरी लेख्न सिके होलान् ? सम्झनाको एल्बममा पुराना हुँदै गएका दिनको स्मरण गर्छन्- 'उ बेला आरुबारी सानो गाउँ थियो । त्यस्तै ६/७ घर थिए होलान् चालिसे गाउँमा । पराल, छ्वाली र जस्ताले छाएका घरहरू रातो, सेतो, पहेंलो माटाले पोतिएर रंगीचंगी देखिन्थे । गाउँघरमा बूढापाकाहरूले सधैंजसो कथा सुनाउँथे । राति घरमा हजुरआमाले पनि रमाइला कथाहरू सुनाउँथिन् । म आफ्ना साथीहरू बटुल्थें र तिनै कथाहरूमा नयाँ कुरा थपेर सुनाउँथे ।' यसरी सुरु भयो उनको कथा-यात्रा । फरक शैली र प्रस्तुतिमा सुनाएका कथाहरू साथीभाइले बडो चाख मानेर सुन्दा उनलाई हौसला मिल्यो । त्यो बेला निगालाको कलमले रूखका पातबाट बनेको मसीमा चोबेर लेख्ने चलन थियो । 'अहिले त लेख्नु भनेको भात खानुजस्तै लाग्छ,' उनी भन्छन्- 'नलेखी बस्नै सक्दिनँ ।' तन्नेरी छँदा प्राय राति लेख्ने बानी थियो । हिजोआज बिहानै साढे ४ बजे उठिसक्छन् । नुवाइधुवाइ गरेप छि नियमित योग र व्यायाम गर्छन् । अनि सुरु हुन्छ उनको लेखन ।
विकल सीमान्तकृत समुदायका प्रवक्ता हुन् भन्दा फरक पर्दैन । उनका कथामा गरबि र निम्न वर्गीय पात्रको बाहुल्य हुन्छ । सडक बढार्ने न्हुछेमाया, लाहुरी भैंसीका लुखुरे हुन् वा चटरी पसल्नी, काइँली अजी, द्वारे वा सबै विकलका कथामा अटाएका छन् । त्यसो हुनुमा उनको बाल्यकालको प्रभाव रहेछ । गाउँमा निम्न वर्गका किसान, ज्यामीका छोराछोरीसँग संगत हुनेगथ्र्यो । तिनैसँगको उठबस, हिँडडुल र तिनका दुःख पीडालाई उनले लेखनमा उतारे । घुमेका ठाउँ, भेटिएका पात्र, घटना र प्रसंग पनि मिसिन्छन् उनका लेखाइमा । लेख्नकै लागि भनेर उनी इन्द्रावती पुगेका छन् । त्यहाँको मण्डन गाउँमा एक महिना बसे । माझीहरूको बसोवास भएको गाउँमा तिनको चालचलन, रीतिरवाज, बसाइउठाइ नजिकबाट नियाले । तिनै कुराहरूलाई समेटेर उपन्यास लेखे, 'अबिरल बग्छ इन्द्रावती', जसको पछि नेपाल टेलिभिजनबाट टेलिशृंखलाका रूपमा समेत प्रसारण भयो । दर्शकहरूले त्यसलाई खुबै रुचाए । 'लाहुरी भैंसी' लेख्दाको पनि रमाइलो प्रसंग छ । दसैंमा टीका लगाउन ससुराली इन्द्रावती गएछन् । सासूले निकै माया गर्ने रहिछन् उनलाई । सधैं ससुरालीमै बसौंबसौं लाग्दो रहेछ । त्यहाँ आएका उनका साडुभाइले हप्काउँदै एकदिन भनेछन्, 'ससुरालीमा धेरै दिन बस्नुहुन्न । पछि तिमीलाई हेला गर्छन् ।' केटौले उमेरका विकलले उनको कुरा पत्याए । पछि दुवैजना सँगै घर र्फकंदा बाटोमा साडुले भैंसी किनेछन् । घरमा लगेर छोराछोरीभन्दा बढी यो भैंसीको स्याहार गरेछन् । सोही कहानीलाई कथा बनाए । मन्दिर जाँदा 'फूल लिनोस् बाजे' भन्ने केटीलाई लिएर 'स्वाना बाज्या' -फूल लिनोस् बाजे) कथा लेखे । नयाँ सडकको पेटीमा माग्ने केटाकेटी देखेपछि 'फुटपाथ मिनिस्टर्स' कथा लेखे ।
विकलले साहित्यलाई पेसाका रूपमा कहिल्यै अपनाएनन् । भन्छन्, 'अहंकार नसम्भिmनुस्, मैले कहिल्यै पैसाको मुख हेरिन। जे लेखें समाजका लागि लेखें र त्यसैमा रमाएँ ।' साहित्यलाई पेसा बनाउन सकिँदैन भन्नेमा उनी ढुक्क छन् । उनका किताबका मुख्य प्रकाशक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन र केही ठूला दैनिकबाहेक अरूले रचनाको पारश्रिमिक नै दिँदैनन् ।
यदाकदा विदेशी साहित्य चोरेको आरोप झेलेका छन् विकलले । त्यसलाई उनी चोरेको नभई प्रभावका रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, 'मूल भाव एउटै र विषय एउटै हुन्छ तर शैली र दृष्टिकोण फरक हुन्छ । कसैले चोरी भन्छ भने म त्यसमा प्रतिवाद गर्न चाहन्नँ ।'
कमैलाई मात्र थाहा होला, रमेश विकल चित्रकार पनि हुन् भनेर । उनका कोठामा बुबा, आमा, हजुरआमा र श्रीमतीका चित्र झुन्डिएका छन् । गन्यो भने झन्डै सयवटा पुग्लान् । महाकवि देवकोटा, युद्धप्रसाद मिश्र, गोपालप्रसाद रिमाल, नातिकाजीदेखि आइन्सटाइनसम्मका पेन्टिङ छन् । कतिले प्रदर्शनी गरौं पनि भनेका छन् रे । बुबाले बनाएको रेखाचित्र हेर्दाहेर्दै उनको ध्यान कथाबाट चित्रकलातिर मोडिएछ । ललितकलामा गएर चन्द्रमान मास्केसँग कला सिक्न भ्याएछन् । एकपटक उनमा गायक बन्ने धुन पनि चढेछ । २००८ सालमा स्वर परीक्षा दिन जाँदा फेल भएछन् । 'कर्मचारीले हाहा, हुहु गरे, गिज्याए,' उनले सो घटना सम्भि“mदै भने । इख लिएर उनी लेखनमै फर्किए । तर उनी वाद्यवादनमा भने उत्तिकै पोख्त छन् ।
चन्द्रशेखरका एक्ला छोरा हुन् रमेश विकल । अमिनी जागिरे बुबाको कहिले विराटनगर त कहिले दार्चुला सरुवा हुन्थ्यो । बुबाकै पछिपछि लाग्दा स्कुलस्तरको पढाइ अस्तव्यस्त भयो । २०११ सालमा एसएलसी -प्राइभेट) पास गरे । स्वअध्ययनबाट कलेज अफ एजुकेसनबाट शिक्षा शास्त्रमा बीएड उत्तीर्ण गरे ।
दिनहरू बिस्तारै ओरालो लागिरहेछन्, डाँडामा घाम अस्ताएझैं । विकललाई बाल्यकालको बिछट्टै याद आइरहेको छ । अर्को जुनि पाए उनी के बन्न चाहँदा हुन् ? 'अर्को जुनिमा म कहाँ रमेश विकल हुन्छु र ? मान्छे भएर नै जन्मिइने हो कि होइन ?' तर यस समयका उनी एक उत्कृष्ट कथाकार हुन् भन्नेमा चाहिँ विवाद छैन ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 10:45 PM
होस गर्नुस् है
अर्न्तराष्टिय फिल्म महोत्सबको अबसर पारेर हिजो साँझ राष्ट्रिय सभा गृहबाट कर्मा फिल्म हेरेर घर फर्किदै थिएँ । बानेश्वर तिर मेरा पाइलाहरु अगाडी बढिरहेका थिए । म एक्लै थिएँ । साँझको समयमा म प्राय एक्लै हिँड्न मन पराउँछु । घडीमा रातीको ८ बजेको थियो । एकसुरले म हिडिरहको थिएँ । अन्नपुणपोष्ट को कार्यालय पुग्नु अगाबै नचिनेको एकजना त्यस्तै २३ बर्षो मान्छे मेरो अगाडी आयो । दुबै हात फैलायो मेरो अगाडी आएर रोक्यो । जोडले भन्यो । को हो काँ जान लागेको । म एकदमै आत्तिएँ । डराएर भनें घर जान लागेको तपाइले के गर्न लाग्नु भएको - ठूलठूला आँखाले हेर्दै उ झम्टिन लाग्यो । म त्यहाँबाट बेपत्ता कुदेँ । उसले मलाई केहि गर्न सकेन । भागेर अलि पर पुग्दा चार पाँच जना मान्छेको हुल देखेँ । मैले त्यहाँ सबै कुरा बताएँ । उनीहरुले नडराउन भने । झापाका रहेछन् ति केटाहरु । तर उनीहरु पनि म सँग हनुमानथान सम्म का लागी मात्र साथी भए । त्यहाँबाट म फेरी एक्लै जानुपर्ने भयो । एकदमै डर लाग्यो । कतै कुकुर भुक्दा पनि झसँग हुन्थेँ । अगाडि हिडिरहँदा मेरो पछि पछि छाया देखिन्थ्यो । कतै अघि को त्यही लुटेरा मेरो पछि आयो कि जस्तो लाग्थ्यो । झण्डै मोबाइल,क्यामेरा र पर्स गुमाइसकेको थिएँ । जोगाएर भाग्न सफल भएँ । तपाइ माथी पनि कतै यस्तो समस्या आइपर्ला होस गर्नुहोस् है । रातीको समयमा एक्लै नहिड्नुस् । भित्र भित्र गल्लीमा राती अँध्यारो हुँदा नहिँड्नुस् । म त गृह मन्त्रालयको ठिक पछाडीको बाटोमा लुटिन बाट जोगिएको हुँ ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 12:08 AM
बिहानै सुबास आगमन जि लाई फोन गरेर सोधे । आजको प्रोग्राम के छ भनेर । नेपाल टुरिजम बोर्ड र सभाग्रिह मा अन्तरास्टिय फिल्म फेस्तटी बलमा जाने कुरा गर्नु भयो । खाना खाएर म पनि त्यतै लागे । मान्छे हरुको भिड लागेको थियो । कोही चिनेका कोही नचिनेका भेटिए । प्रोग्राम ओपेनिङमा बसे । दिपक रौनियारको डकुमेनट्री हेरे । आधा घण्टा को थियो । सकिएपछी बाहिर आएर चिया लिए । अचानक भेट भयो रेडियो नेपाल का अमर लामा दाई सँग भेट भयो । उहा सँग कुरा गर्न नपाई कनकमणी दीक्षित सँग गफ गर्न गए । जनआ न्दोलनका घाइते हरुका बारेमा हिमाल खबर पत्रीकामा रिपोर्टिङ गर्न भन्नु भयो । हुन्छ भने । त्यै भिडमा एउटा खोजी राखेको मान्छे लाई पनि भेटे । हसिलो अनुहार,गोरो बर्ण,मोटो जिउ थियो । मैले फोटो मा मात्र देखेको थिए उहालाई । पोपुलर लेखक मन्जुश्री थापा उहा नै हो भन्ने ठम्यौन मलाई गाह्रो भएन । एक्छिन कुराकानी । छिट्टै उहालाई भेटेर अन्तर्वाता लिनेछु । अहिले उहाका पुस्तकहरु पढिरहेको छु ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:26 AM
Labels: आजको भेट
एफएमले देउडाको जग हाल्दैछ
(यो लेख हिजो, कार्तिक २२,२०६५ को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको छ ।)
भेरीको उर्लंदो भेल छाल हान्ने बबैलाई
देउडा भाका बासा फेर स्वागत छ सबैलाई ।
मार्तडी बजारबाट केही मिनेट हिँडेर अलि माथि डाँडामा पुगेपछि रेडियोमा यो गीत गुन्जियो । त्यस दिन देउडा भाकाका यस्ता गीतहरू बजिरहेका थिए । प्रस्तोताको लवज पनि स्थानीय थियो । लाग्यो, यो पक्कै रेडियो नेपाल होइन, यतैको कुनै एफएम हुनुपर्छ । नभन्दै एफएमको एन्टेना देखियो । यो त रेडियो बाजुरा पो रहेछ । गाउँले पारामा मिसिएर देउडा गीत घन्किरहेको थियो ः
सम्झीसम्झी जीउ झुरन्छ
सुदूरपश्चिम स्वर्ग सरी
घर आईझा परदेशी कठै
नटुटौ पिरेमको डोरीरईझाऊ जनमभरी ...। डाँडा-पाखालाई सङ्गीतको रसमा चुर्लुम्म पारेर बज्ने यस्ता गीतहरू कान थापेर सुनिरहेका भेटिन्थे स्थानीयहरू । जता गए पनि, जहाँ गए पनि प्रायःका हातहातमा सानो रेडियो भेटिन्थ्यो । छ वर्षअघि भारतको अल्मोडामा रहँदा भारी बोक्नु, गाईभैँसी चराउनु, खेतबारीमा काम गर्नु दिनचर्या बनेको थियो- आँटीचौर-४, बाजुराका शेरबहादुर खड्का, २८, को । कामको खोजी गर्न र द्वन्द्वको प्रभावले ज्यान जोगाउन उनी भारत पसेका थिए । विदेशी भूमिमा दिनरात नभनी पसिना बगाउने तिनै शेरबहादुर अहिले एफएममा कार्यक्रम चलाउँछन् । गत वर्षको चैत महिनादेखि रेडियो बाजुरामा उनले काम पाएका हुन् । हरेक दिन देउडा गीतहरू समेटिएको 'हाम्रो भाका' कार्यक्रम बिहान-बेलुका आधा घन्टा प्रसारण हुने गर्छ । यहाँका रनवन, मेलापात, पानी, पँधेरो र धारामा बज्ने गीतहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा ठाउँ दिन्छन् । त्यसैले अरूभन्दा लोकपि्रय छ उनको कार्यक्रम । "नसोचेको ठाउँमा पुगेँ । रेडियो स्टेसन देखेकै थिइनँ । कार्यक्रम चलाउन पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ," उत्साहित मुद्रामा उनले भने । अचेल त उनलाई नचिन्ने कोही पनि छैनन्, सबैको प्यारो बनेका छन् । कार्यक्रमका लागि सातामा सयौँ पत्रहरू आउँछन् । अब सञ्चार क्षेत्रमै लाग्ने उनको सोच छ । परदेशबाट घर फर्किंदाको क्षण सम्भझदै खड्काले भने, "विदेशीको गुलामी गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा भारी बोक्नु उचित लाग्यो ।"रेडियो बाजुरामा समाचार पढ्ने एक्ली महिला हुन्, रमा खड्का, १८ । मालिका उमाविमा दस जोड दुईमा अध्ययनरत रमा विगत पाँच महिनादेखि समाचारमूलक 'हालखबर', 'महिला आवाज', 'तपाईंको पत्र हाम्रो गीत'जस्ता कार्यक्रम चलाउँछिन् । एफएममा बोल्दाको अनुभूति सुनाउँदै भन्छिन्, "सुरुसुरुमा डर लाग्थ्यो । सक्तिनँ कि जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले सामान्य लाग्छ ।" उनका नाममा हरेक साता अछाम, बझाङ र बाजुराका विभिन्न ठाउँबाट प्रशंसा र सुझाव लेखिएका ६०/७० वटा पत्र आउँछन् । रेडियो बाजुरामा उद्घघोषण र प्राविधिक दुइटै काम सम्हाल्नेहरू पनि छन् । आँटीचौरका कृष्ण वली समाचार पढ्नुका साथै गीतिकथा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तै मार्तडी, माझगाउँका वसन्त विक, २१, ले एकातिर 'फोन इन' र 'सिर्जनात्मक गीत तरङ्ग' कार्यक्रम चलाउँछन् भने अर्कोतिर प्राविधिकको काम पनि गर्छन् । आर्थिक समस्याले पढ्न सहर जान नसकेका विक नजिकै सदरमुकामको बाजुरा क्याम्पसमा बीएड प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् । त्यस ठाउँमा महिला र बालबालिकाका हकहितका क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था 'पिसवीन'ले एफएम ल्याउन पहल गरेको हो । यसमा पिसवीनको एकल स्वामित्व छ । एफएम सञ्चालनमा ल्याउन जम्मा १५ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च लागेको बताउँछन्, संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर वली । राजधानीबाहिरबाट इक्वेल एक्सेसले उत्पादन गरेका 'देश-परदेश' र 'खेल्दै सिक्दै'बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू यतै उत्पादन हुन्छन् । सञ्चारमा पहुँच नभएका बाजुरेलीहरूले आफ्ना आवाजहरू अचेल यही एफएममार्फत व्यक्त गर्छन् ।
देउडाका लागि चर्चित छ यो ठाउँ । प्रायःजसोले यस्तै गीतहरू लेखेर बढी मात्रामा पठाउँछन् । तर, श्रोताले लेख्ने विषयवस्तुहरू भने फेरिएका छन् । मायापिरतीका गीतहरूबाट फड्केर बहुविवाह, अनमेल विवाह, वन विनाश, अनिकाल, बाढीपहिरो, राजनीतिक चेतनाजस्ता विषयमा गीतहरू बढी लेख्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न पार्टीका सभासद्हरू, अग्रणी महिला, बाल प्रतिभा, सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई हरेक साता स्टुडियोमा निम्त्याएर अन्तरक्रिया गरिन्छ । कात्तिकको पहिलो साता स्थानीय राजनीतिकर्मी रुक्मिणी शाहले एफएममा बोल्ने अवसर पाइन् । "क्या भन्याँ, भन्याँ । पहिलोचुटी एफएम आयाँ," संविधानसभामा जिल्लाबाट महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही नहुँदा दुःखेसो पोख्दै बाजुरेली भाषामा उनले भनिन्, "नेताहरूले हामीलाई फुर्काए, फुल्याए तर नीतिनिर्माण तहसम्म कसैले पुर्‍याएनन् । यहाँको विकास निर्माण र महिलाका हकहितका पक्षमा कसले बोलिदिने ?"एफएममा कार्यक्रम चलाउन स्थानीय बाल क्लबले ठूलो सहयोग गरेको पाइयो । यतातिर अभिरुचि राख्ने स्थानीयहरू क्लबमा रहँदा वक्तृत्वकला, वादविवाद, नाचगान, कविता लेखन, सडकनाटक प्रदर्शनजस्ता अतिरत्तिm क्रियाकलापमा संलग्न भइरहन्थे । तीन वर्षअघि सिर्जनशील बालसमूहमा रहँदा यस्तै क्रियाकलापमा संलग्न थिइन्, मार्तडी-५, बाजुराकी उन्नति रावल, १९ । जो अहिले 'फोन इन' र 'बाल कार्यक्रम' चलाउँछिन् । स्कुलमा छँदा कविता लेखन, वक्तृत्वकला, वादविवाद प्रतियोगितामा भाग लिनु, नाच्नु, गाउनु उनको ठूलो सोख थियो । जिल्ला बालअधिकार मञ्चमा दुई वर्ष कोषाध्यक्ष भएर काम गरेकी उन्नति अहिले शान्ति र विकासका लागि युवा सञ्जालकी उपाध्यक्ष छिन् । उनी आफ्नो कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकार, हकहित र समस्याका मुद्दाहरू उठाउँछिन् ।जता जाऊँ, जहाँ जाऊँ सबैसँग एउटा रेडियो हुन्छ अचेल । घाँस काट्दा, वस्तु चराउँदा, भारी बोक्दा हरेकको काँधमा रेडियो झुन्डिएको हुन्छ । बिहानीको झुल्के घाममा खेतमा काम गर्दै गरेका भेटिए, ताँप्राका मदन नेपाली । नजिकै सानो रेडियोमा 'बाडुली' कार्यक्रम बजिरहेको थियो । उनलाई रामारोशन एफएम सुन्न मन पर्दोरहेछ । यस एफएमबाट देउडा भाकामा आधारति कार्यक्रमहरू बढी बज्ने र समाचार पनि स्थानीय भाषामा सुन्न पाइने भएकाले सबैको मनोरञ्जन गराउने माध्यम हुन पुगेको रहेछ यो एफएम । मानिसलाई नयाँ जानकारी, सूचना, मनोरञ्जनका लागि पनि रेडियो सुन्नुपर्दोरहेछ भन्ने चेत खुल्न थालेको छ । "मनोरञ्जनका साधनसँगै दुःखसुख बिसाउने ठाउँ बनेको छ एफएम," जुगाडा-८, बाजुराका केशव खड्का गीतमा लेख्छन् ः
कैका घर आगो बाल्नु कैका घर ताप्नु
सुवाले छोडेर जाँदा कोइ भएन आप्नु
जीउला धान बयाली खेल्दा असौजका मैना
नत लाई बाडुल्या खुट्को न त धेकाई सैना । आफ्नी मायालुले छोडेर जाँदा एक्लो भएको पीर पोखे उनले । सपनामा आफ्नै मायालु देख्न नपाउँदा र बाडुली नलाग्दा नियास्रो मानिरहेका छन् उनी । मायापिरतीसँगै राजनीतिका गीत पनि आइरहन्छन् । ब्रह्मतोला कुँडीका पदम उखेडा लेख्छन् ः
गणतन्त्र लागू भयो शोषण दमन तोड्न
अन्याय र अत्याचारको केही सुधार गर्न
दलित पीडित जनतालाई शोषकले खायो
२०६५ सालमा गणतन्त्र आयो । श्रोताले पठाएका देउडा गीतले रेडियो बाजुरामा बोराहरू भरिएका छन् । यी चिट्ठीलाई पुस्तकाकार दिने सोचमा छन्, स्टेसन म्यानेजर तुलाराम जैसी । एफएमका कारण आफ्नै उद्गमस्थलबाट विलीन हुन लागेको देउडाको संरक्षणमा सहायक हुन्थ्यो कि ? भन्ने आशा पलाएको छ उनका मनमा ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 11:59 PM
(यो लेख २०६५ जेठ १९ गतेको नेपाल साप्ताहिकका प्रकाशित भर्इसकेको छ । डकुमेन्ट रहोस भनेर यहाँ पोस्ट गरेको हुँ ।)
९0 वर्षउकालो लागेका डायमनशमशेरलाई पुरानो जेल बसाइ सम्झदा कस्तो लाग्छ - पक्कै आखामा आसु आउछ । निकै भावुक बनाउछ । तर, त्यही नख्खु जेल बसाइमा लेखिएको उपन्यास सेतो बाघको लेखकस्वबाटै उनको गुजारा चल्दैछ । विश्वका पाचवटा भाषामा अनुवाद भएको त्यो उपन्यास उनले छ वर्षलगाएर लेखेका हुन् । भन्छन्, "यसको गाता छाप्न म ब्याङ्कक पुगेको थिए । साढे सात लाख रुपिया ब्याङ्क ब्यालेन्स छ । दालभात खान पुगेकै छ ।"
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लादेका बेला डायमन नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर शाखाका सभापति रहेछन् । उनलाई नख्खु जेलमा छ वर्षथुनियो । साथमा थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी, केआई सिंह, तारिणीप्रसाद कोइराला आदि ।
नख्खु जेलको वातावरण एकदमै दुःखदायी थियो । आज मार्छ कि भोलि मार्छ ठेगान थिएन । पञ्चायती व्यवस्था स्वीकार्न लोभ, लालच र धम्कीसमेत दिइन्थ्यो । उनीहरू मर्न तयार भए तर राजाको कदम स्वीकारेनन् । जेलमा उनीहरू राजनीतिक छलफल र बहसमा समय बिताउथे । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सपना देख्थे । डायमन भन्छन्, "त्यसबेला गिरिजाप्रसादले कविता लेखेको र तारिणीप्रसादले शब्दकोश लेखेको अनि केआई सिंहले आफ्नो आत्मकथा सुनाएको अझै सम्झन्छु ।"
आधा दर्जन उपन्यासका लेखक डायमनको सेतो बाघ प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका छोरा जगतजङ्गमाथि लेखिएको उपन्यास हो । उपन्यासहरूकै माध्यमबाट उनी विश्वका सबैजसो मुलुक घुमिसकेका छन् । जेल बसाइमा साथीहरूसग मगाएर विलियम शेक्सपियर, ओ हेनरी, ओस्कार बाइल्ड, लियो टल्सटाय, जेम्स केल्म्यानलगायत थुप्रैका कृतिहरू जेलमै पढे डायमनले । ती किताबहरू अहिले घरमा पुस्तकालय बनाएर राखेका छन् ।
बाधिन्न हात्ती माकुरे झीनो जालोले तुनेर
रोकिन्न क्रान्ति दुइचार मान्छे झ्यालखानामा थुनेर ।
२८ वर्षघि राजनीतिक बन्दीका रूपमा भैरहवामा थुनुवा जीवन बिताएका बेला मोदनाथ प्रश्रितले कोरेका पङ्क्ति हुन् यी । उनी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाली विषय पढाउथे । सरकारले क्याम्पसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा विद्यार्थीले आन्दोलन मच्चाए । आन्दोलन उठाउने मोदनाथ जेल परे, सगै सुरु भयो साहित्यिक यात्रा ।
जीवनको झन्डै १० वर्ष जेल बसाइमा प्रश्रतिले देवासुर सङ्ग्राम -महाकाव्य, गोलघरको सन्देश (खण्डकाव्य), चोर (उपन्यास), आस्था र प्रथा ः एक विवेचना (धार्मिक ग्रन्थ), नारी बन्धन र मुक्ति (समाजशास्त्र) लेखे । भन्छन्, "मोहनविक्रम सिंह र प्रचण्डले मेरा कतिपय कृतिहरू पाठ्यक्रममा राखेका छन् । बाबुराम भटराइ , प्रदीप नेपाललगायत धेरैले मेरा कृतिहरू पढेर कम्युनिस्ट भएको बताएका छन् ।" केन्द्रीय कारागारमा उनले लेखेको गोलघरको सन्देश छापिनेबित्तिकै ३५ हजार प्रति बिक्री भएको थियो ।'कुरूपताको अध्यारोमा सुन्दर साहित्य र कलाको जन्म हुन्छ' भन्ने पाब्लो पिकासोले भनाइजस्तै हरेक सुन्दर साहित्यको जन्म अध्यारा कालकोठरीमा भएका छन् । अभाव, पीडा र सङ्कटको घडीमा सिर्जना गरिएका साहित्य नै जीवन्त बनेका छन् । तिनीहरू नै मानवीय संवेदना उजागर गर्न र पाठकको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन् । खुला आकाशमा भन्दा चारैतिर पर्खालले घेरिएका अध्यारा कोठामा सिर्जना गएका रचनाहरू जीवनका मार्गदर्शक बनेका छन् । जेल बसाइका क्रममा साहित्य लेख्ने स्वदेशी तथा विदेशी राजनेता र साहित्यकारहरूको सूची लामै छ ।
नेपालमा यसका अग्रणी हुन्, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । उनले धेरैजसो साहित्य जेलमा नै लेखेका हुन् । स्वतन्त्र भारत आन्दोलनमा सक्रिय रहदा पटनामा पक्राउ परेका बीपीलाई बन्दीपुर जेलमा थुनिएको थियो । त्यही भारतीय प्रधानमन्त्री राजेन्द्रप्रसादले लेखेका थिए, इन्डिया डिभाइडेड । बीपीलाई राजा महेन्द्रले थुप्रैपटक जेलमा राखे । जेलबाट निस्कदा एक दर्जन कृतिका पाण्डुलिपि लिएर निस्कने सपना पालेका थिए बीपीले । नभन्दै तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाइ, सुम्निमा, मोदी आइन, श्वेतभैरवी, बाबुआमा र छोरा, मेरो कथाको पाण्डुलिपि तयार पारे । लेजरक्विस्टद्वारा लिखित द साइवलको अनुवाद पनि जेलमै गरेका थिए । शरदचन्द्र चर्टर्जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लियो टल्सटाय, म्याक्सिम गोर्की र इभानतुरर्गनेवका किताबहरू पढ्न रुचाउने बीपीका लेखहरू बनारस, नया दिल्ली, लन्डन, कोलकाता र पेरिस का पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएका थिए ।
जेलभित्र लेख्न पाइदैनथ्यो । कापी-कलम राख्नसमेत दिइएको थिएन । चौकीदारसग मिलेर कागज र सिसाकलम गोप्य रूपमा मगाउन बीपी सफल भएका थिए तर उनलाई लुकाउने समस्याले पिरोलिरहन्थ्यो । खाना पकाउने चुलोमा उनी सिसाकलम र कागज लुकाउथे । बीपी मासिक ३५-४० का दरले पत्र लेख्थे । शैलजा आचार्य, रोशा, तारिणी र धरणीधर कोइराला अनि जवाहरलाल नेहरू आदि पत्र पाउनेहरूमा थिए । नेहरूलाई पठाइएको पत्रसग जोडिएको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ । एकपटक पत्र लेख्न कागजको अभाव भयो बीपीलाई । हावाले उडाएर ल्याएको साबुनको खोलमा नेहरूलाई पत्र लेखे । त्यो पत्र जुत्ताको तलुवाभित्र सिलाएर गोप्य रूपमा भारत पठाइयो ।
कृष्णप्रसाद भट्टर्राई र बालचन्द्र शर्माले त्यस पत्रलाई नेहरूकहा पुर्‍याएका थिए । बीपीले लेखेको पत्र पढ्दा जवाहरलाल नेहरूका आखाभरि आसु थियो रे ! त्यो पत्र अहिले भारतको नेहरू स्मारक सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ । ०१८ माघ ५ गते सुन्दरीजल जेलमा बीपीले लेखेको डायरीको सानो अंश यस्तो छ, "हिजो घरबाट आएका किताबहरूलाई सुम्सुम्याए, नया किताब तरुनी हुन् । तिनमा आफूलाई चुर्लुम्म पार्नुभन्दा पहिले तिनीहरूलाई सुम्सुम्याउनुपर्छ, यताउता उल्टाइपल्टाइ हेर्नुपर्छ, एउटा आशा र उत्कण्ठाको सरसरी नजर माथिदेखि तलसम्म हाल्नुपर्छ, यसो सुघ्नुपर्छ ।"
जेलभित्र विश्वका पनि थुप्रै राजनेता एवम् साहित्यकारले लेखेका छन् । दक्षिण अरिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो २७ वर्षो लामो जेल जीवनमा लङ वाक् टू फ्रीडम नामक किताब लेखेका छन् । त्यस्तै नाइजेरयिन लेखक केन सारो विवाले सोजाल्वाय, क्रिस अवानिले कालाकुता, हिटलरले मेनकेम्फजस्ता थुप्रै कृतिहरू जेलमा लेखेका हुन् ।
स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूद्वारा छोरी इन्दिरालाई जेलबाट लेखिएका पत्रहरू विश्व साहित्यमा निकै चर्चित छन् । राजनीतिमा लाग्न इन्दिरा गान्धीलाई ती पत्रहरूले निकै सघाएका थिए । भारतीय राजनेता लाला लाजपत राय, गोपालकृष्णलगायतबाट प्रभावित नेहरू र उनका पिता मोतीलाल जेलमा सगै थिए । पिता र पुत्रलाई छ महिना जेलमा राखियो । जेलमै सुरु भयो नेहरूको साहित्यिक यात्रा । डिस्कवरी अफ इन्डिया, आत्मवृत्तँन्त र ईन्डिया डिभाइडेड भागमा बाडिएको विश्व इतिहासबारेको ठेली नेहरूले जेलमै लेखेका थिए । सबैको मन छुन सफल नेहरूले आफ्नी छोरीका लागि लेखिएको पत्रको सानो अंश यस्तो छः"प्यारी इन्दु ! जीवन जतिसुकै कठोरपनले भरिएपनि मेरा निम्ति ज्यादै सुन्दर छ । लाग्छ, मैले अझै कठोर कार्य गर्नुपरेको छ ।
मेराबारेमा चिन्ता नगर्नू, मैले जानीजानी आफ्नो पथ रोजेको हु । हरेक पुस्ताले आ-आफ्ना समयको सामना गर्नुपर्दछ ।"नेहरूकै झल्को दिने गरी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री प्रदीप नेपालले 'माघ १९' पछि प्रहरी तालिम केन्द्र, महाराजगन्जको खप्तड जेल र दुवाकोटबाट छोरीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखे । उनी भन्छन्, "माघ १९ पछि महाराजगन्ज थुनामा रहदा लेखिएका कथा, कविता, संस्मरण र पत्रहरूलाई किताबको रूप दिने तयारीमा छु ।"
०३३ सालमा केन्द्रीय कारागारमा रहदा उनले सञ्जय थापाका नाममा लेखेका ५० वटा कथा शासकहरूले खोसे तर जेलमा नै क्रान्तिकारी महिला मारियालोरेवारोसका बारेमा लेखिएको किताब पूर्वाञ्चलमा मात्रै पाच हजार प्रति बिक्री भयो । उनको उपन्यास स्वप्नील सहरमा नख्खु जेलमा बिताएका क्षणहरू प्रतिविम्बित छन् ।
पूर्वकम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनालीले भैरहवा र वीरगन्ज जेलमा रहदा बन्दी रहर लेखे । र, उनको अतीतका सम्झनाहरू जेलकै पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ । प्रथम गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहले जेलमा नाटक लेखेका छन् । दक्षिण अमेरिकी कम्युनिस्ट नेता चे ग्वेभाराकी महिला साथी क्लाराका बारेमा नाटक लेख्नुका साथै जेलमै नाटक खेलाए उनले । त्यसरी नाटक खेल्नेमा अहिलेका अर्थमन्त्री रामशरण महत, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, खेमराज भट्ट 'मायालु', इश्वर लामालगायत थिए ।
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले अधिकांश रचना जेलमै लेखेका थिए । तिनीहरूमा उर्वशी, मेरो प्रतिविम्ब, कारागारका सम्झना, ज्यानमारा र नेवारीमा सिस्ता, फुस्वा, तृष्णा, लुमनि, धामा, ग्वयस्वा आदि हुन् । क्रान्तिकारी कविता लेखेको र राजनीतिमा लागेको अभियोगमा सिद्धिचरणलाई १८ वर्षो जेल सजाय दिइएको थियो । गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज, जगतमान वैद्य, फत्तेबहादुर सिंह, जोगवीरसिंह कंसाकारका साथै सिद्धिचरणलाई त्यहा राखिएको थियो ।
राणाशासनको विरोध गरेबापत वीरगन्जमा धच गोतामे, भूपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, ठाकुरकुमारसगै पक्राउ परेका श्यामप्रसाद शर्माले जेलमा थुनुवाको डायरी र मेरा डायरीका पाना लेखेका छन् । श्यामप्रसाद भन्छन्, "मेरा कुरा किताबमा नै समेटिएका छन् ।" श्यामप्रसाद मात्र किन - कविकेशरी चित्तधर हृदयले छ वर्षजेलमा बिताउदा सुगत सौरभ (महाकाव्य) लेखेका छन् ।
जेल साहित्यलाई अध्ययन गर्दा भुल्नै नसकिने पाटो हो, माओवादी सशस्त्र 'जनयुद्ध' । त्यस क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरू जेल परे । अधिकांशले सिर्जनामै समय बिताए । कवि तथा पत्रकार कृष्ण सेन 'इच्छुक'ले सहयोद्धा मित्रमणि आचार्यको सम्झनामा शोकाञ्जली काव्य लेखेका छन् । बन्दी र चन्द्रागिरि अनि इतिहासको यस घडीमा पनि सेनले जेलमै लेखेका हुन् ।
०५९ मा भारतको पटनामा पक्राउ परेकी माओवादी कार्यकर्ता निभा शाहले जेलमा लेखिएका कविता समावेश गरेर किताब निकालेकी छन्, इन्कलाब जिन्दावाद । केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताएकी निभा साथीहरूसित कविता, गीत, गजल लेख्ने गरेको सुनाउछिन् । त्यस्तै, जनयुद्धमा लागेका गणेश भण्डारीले आस्थाको निहारिका , गङ्गा श्रेष्ठले ज्वालामुखीमाथिको यात्रा लेखेका छन् । त्यस्तै शान्ता श्रेष्ठको अन्धकारभित्रको अन्धकार, उमा भूजेलको बन्द पर्खालदेखि खुला आकाशसम्म, कृष्ण केसीको मानव वधशाला प्रकाशित छन् । राजनीतिक अभियोग मात्र होइन, विभिन्न अभियोग लागेर थुनामा परेकाहरू पनि सिर्जनामा व्यस्त छन् ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:56 AM
यो रुघाले पनि मलाइ कहिल्यै छोडेन । कस्तो माया लागेछ म सँग यसको । मानौँ कुनै प्रेमिले आफ्‍नी मायालु लाइ चपक्क अँगालोमा कसे जस्तै । एकछिन पनि टाढा हुन नसकेझै । रुघाले मलाइ एकोहोरो माया गरिरहेछ लभको लागी 'पर्पोज' हानिरहेछ । तर मैले भने उसको 'पर्पोज'लाइ रिजेक्ट गरिरहेछु । रिजेक्ट गर्न कहिल्यै डिकोल्ड खान्छु,कहिल्यै मेडिकलका चकलेटहरु तर ? असफल । उसकै जीत हुन्छ मेरो हार । कहिलेकाँहि लाग्छ किन बेकारमा सधैँ पैसा खर्च गरिरहनु ? यसको पर्पोज ओके गरुँ । तर सक्दिन । नाकबाट एकोहोरो बगिरहने सिँगान पुछ्‍दा पुछ्‍दा रुमाल भिजिसक्यो । कानहरुले सुन्न पनि छोडिदिन्छन् । पढ्‍लेख गर्न गार्‍हो हुन्छ । अनि मैले कसरी उसको पर्पोज ओके गरुँ ? तिमी नै भनिदेउ ए रुघा म कसरी तिम्रो पर्पोज ओके गरुँ ? तपाइहरुलाइ पनि यसरी कसैले एकोहोरो माया गरेको छ ?
जाडो बढ्‍यो काठमाडौँमा
जाडो निकै बढिरहेको छ काठमाडौँमा । म इन्टरनेट चलाउँदै वेब पत्रिकाहरु पढिरहेको छु । हात पनि त्यतिसारो चलिरहेका छैनन्‍ । बाहिर घाम लागिरहेको छ तर भित्र कोठामा भने खपिनसक्नु जाडो छ । एक पछि अर्को गर्दै समाचार र लेखहरु निरन्तर लेख्नुपर्ने भएको छ । बल्ल आज रमेश विकल सँगको अन्तरबार्ता तयार पारें । अर्को हप्ताको शनिबार कान्तिपुर कोशेलिको पानामा पाठकहरुले त्यो अन्र्तवार्ता हेर्न पाउँनुहुनेछ । १२ बजेतिर नेपाल साप्ताहिक बाट रमण घिमिरे र दिवस गुरागाइले फोन गरेर जीवन र कलाका लागी लेख माग्नुभएको थियो । साँझ सम्म तयार पारिसक्ने सोचमा छु । मलाइ हरपल लेखिरहन मन लाग्छ,नया ठाउँ घुमिरहन मन लाग्छ । यसको मजा नै अर्को हुँदो रहेछ । साँच्चै तपार्इहरुलाइ के गर्न मन लाग्छ ? यसो मेरो ब्लगमा लेखनुस् न । म तपाइहरुको कमेन्ट,जवाफको प्रतिक्षामा छु ।
Posted by Narendra Raule (नरेन्द्र रौले) at 1:02 AM